साइकले विचार १ : एकलब्य ~ जोगी जिन्दगी
साइकले विचार १ : एकलब्य
2:33 AM खुद्रा विचार 1 comment
मान्छेका दुई स्वरुप छन् । तर दुई स्वरूप मान्छेले आफूमा भने कहिल्यै देख्दैन । म आफैँले चाहिँ कम्तिमा देख्दिनँ त्यसैले मैले मान्छेको जातलाई नै यो उदाहरणको घानमा हालेको हो । खासमा यो मेरो आफ्नै कुरा हो ।
भन्नलाई त दुई दिनको जिन्दगी भन्छ मान्छे तर जिन्दगी लामो छ । छोटो छँदै छैन । किनकी मान्छेले कहिल्यै जिन्दगी छोटो छ भनेर बाँचेकै हुँदैन । हरेक मान्छे यसरी बाँच्छ मानौँ ऊ कहिल्यै मर्नेवाला छैन । हुन त मृत्यु अवश्यंभावी छ भनेर जान्ने एक मात्र प्राणी हो मान्छे । जनावरहरु पनि संभावित मृत्यु वा खतराबाट त भाग्छन् तर (सायद) उनीहरुलाई कहिल्यै थाह हुँदैन कि मृत्यु अवश्यंभावी छ । एक दिन मर्नै पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा थाह हुन्थ्यो भने छाडा छोडेको कुखुराको भाले फर्केर खोरमा आउँदैन्थ्यो, जंगलतिर फुर्र हुन्थ्यो । पाखामा चराउन लगेको बाख्राको पाठो टारी फड्केर कुलेलम ठोक्थ्यो ।
जनावरलाई अवश्यंभावी मृत्युको ज्ञान हुँदैन । उनीहरु यसरी बाँच्छन् मानौँ उनीहरूलाई कहिल्यै मर्नु पर्दैन ।
अच्छा, म खासमा २ प्रकारका मान्छेका कुरा गर्दै थिएँ ।
तिमी हाम्रो लामो जिन्दगीमा अनेकन मान्छे आउँछन् । अनेकन मान्छे जिन्दगीबाट निस्कन्छन् । कुनै मान्छे लामो समयसम्म हाम्रो जिन्दगीसँग जोडिन्छन् । कुनै एकाध दिनमैँ निस्किएर जान्छन् । जिन्दगीभर तिमीसँग रहने भनेको त तिमी मात्रै हो । जन्मदेखि मृत्युसम्म साथ दिने यहाँ कसैको कोही हुँदैन । (फेरि कता बितर्किएँ । सरी है । म लाइनमा आइहाल्छु ।)
जिन्दगीमा आएका मध्ये केही मान्छे यस्ता हुन्छन् जसले तिम्रो सर्वोत्कृष्ट स्वरुप के हो बताइदिन्छन् । तिम्रो सबलताको क्षितिज उघारिदिन्छन् । तपाईको सुमधुर स्वरूप देखाएर जान्छन् । तिम्रो संभावनाको गणित सिकाएर जान्छन् । तिम्रो अस्तित्वको अर्थ महशुस गराएर जान्छन् । तिम्रो गुण, तिम्रो सकरात्मकता, सिर्जनात्मकता, तिम्रो सर्वाधिक उन्नत अवस्था जे सुकै होस् त्यसको आभाष दिएर जान्छन् ।
मान्छे आफैँलाई आफ्नो उत्कृष्टताको बारेमा कहिल्यै थाह हुँदैन । तिमीमा मानवता कति छ ? दया कति छ ? निस्वार्थता कति छ ? तिमीमा प्रेम कति छ ? निष्ठा कति छ ? समर्पणभाव कति छ ? तिमी कत्तिको क्षमाशिल हुनुहुन्छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर तिमी एकलैले कहिल्यै थाह पाउन सक्नुहुन्नँ । तिमीलाई कहिल्यै थाह हुँदैन तिमीमा कुन स्तरको हृदय छ ? तिमीलाई कहिल्यै थाह हुँदैन तिमी कुन तहसम्म झुकेर कसैसँग अकारण माफि माग्न सक्नुहुन्छ वा कसैलाई नि:सर्त माफि दिन सक्नुहुन्छ । आफ्नै स्वभाव बुझ्न पनि तपाईलाई कसैको सहयोग चाहिन्छ । आफ्नै हृदयको संगीत अनुभुत गर्न पनि तिम्रो जिन्दगीमा कोही न कोही मान्छे आएकै हुनुपर्छ ।
एक दिन मर्नै पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा थाह हुन्थ्यो भने छाडा छोडेको कुखुराको भाले फर्केर खोरमा आउँदैन्थ्यो, जंगलतिर फुर्र हुन्थ्यो । पाखामा चराउन लगेको बाख्राको पाठो टारी फड्केर कुलेलम ठोक्थ्यो ।
पहिलो कोटीमा पर्ने यस्ता मान्छेहरूले तिमीलाई तिम्रो सर्वोत्कृष्ट स्वरुप देखाइदिन्छन् । जस्तो कि जाम्बवन्तले हनुमानलाई "तिमी उड्न सक्छौ" भनेर थाह दिएका थिए । कृष्णले अर्जुनको हृदयमा लुकेको तटस्थताको भाव जगाइदिएका थिए ।
तर कुनै कुनै सम्बन्धहरू यस्ता हुन्छन् जसले तिमीलाई दानवी बनाइदिन्छ । तिमीभित्र लुकेको राक्षसलाई उक्साईदिन्छ ।
कुनै मान्छे तिम्रो जिन्दगीमा आउँदा अथवा जिन्दगीबाट बाहिर निस्कदाँ तिमीलाई यो देखाएर जान्छ कि ऊ कतिसम्मको खराब छ । कतिसम्मको हरामी छ । भ्रष्ट छ । लाचार छ । यस्तो प्राय जिन्दगीमा आउँदा भन्दा पनि जिन्दगीबाट निस्किँदा ज्यादा हुन्छ ।
भन्छन् नि, जब कोही मान्छे तिमीबाट टाढा हुन्छ अनि बल्ल देखाएर जान्छ उसको असली स्वरूप । उसको सक्कली अनुहार ।
यहाँ नेर यौटा कुरा ख्याल गरिसक्नु भयो होला । यो कुरा पहिलेजस्तो छैन । उल्टो छ । उसले तिमीलाई महशुस गराउँदैन कि तिमी कतिसम्मको खराब हुनुहुन्छ ? उसले यो भनेर जाँदैन कि तिमी कतिसम्मको अमानवीय हुनुहुन्छ ? कतिसम्मको निर्दयी हुनुहुन्छ ? उसले भन्दैन कि तिमी कुन तहसम्मको घृणा गर्न सक्नु हुन्छ ? अँह भन्दैन कि तपाई कतिबिघ्नको घिनाहा हुनुहुन्छ । बरू बताएर जान्छ कि ऊ आफू चैँ कति खराब छ । ऊ कति निकृष्ट छ ? उसले तिमीलाई होइन आफूलाई चिनाएर जान्छ । आफ्नो अनुहारको पर्दा उचालेर सक्कली चेहरा देखाएर जान्छ ।
अब यी दुबै अवस्थाबाट गुज्रने मान्छे, सिकाएर जाने मान्छेको स्वरुपमा आफूलाई हालेर हेर्नुस् । तिमीले तिम्रो जिन्दगीमा आउने मान्छेहरूको क्षमता उकास्नु हुन्छ कि दोष ? उनीहरूको प्रेमलाई उकेरा लगाउनु हुन्छ कि घृणालाई ? उनीहरूको संभावनालाई उजागर गर्नुहुन्छ कि संकिर्णतालाई ? उनीहरूको पहिचानलाई हौस्याउनु हुन्छ कि गिराउनु हुन्छ ? उनीहरूको सौन्दर्यको तारिफ गर्नुहुन्छ कि गराउनु हुन्छ कुरुपताको एहसास । ‘तिमी असल मान्छे हौ’ भनेर उत्साहित पार्नु हुन्छ कि ‘तिमी त खराब मान्छे रहेछौ’ भनेर निरास बनाइदिनु हुन्छ ।
त्यो मान्छे एकलै हुँदा न कहिल्यै असल थियो न कहिल्यै खराब थियो । त्यो मान्छे त खासमा तिमीले जे बनाइदिनु भयो त्यही भएको मात्रै थियो ।
जब तिमी कसैको जिन्दगीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ तिमीसँग सँधै दुई प्रकारको भएर प्रवेश गर्ने अवसर हुन्छ । जब तिमी कसैको जिन्दगीबाट बाहिरिनु हुन्छ, तिमीसँग सधैँ दुई प्रकारको भएर छुट्टिने विकल्प हुन्छ ।
किनकी एकलो मान्छेलाई थाहै हुँदैन उसको सकरात्मकता र नकरात्मकताको सिमाना कुन किनारसम्म छ, त्यसैले मान्छेलाई मान्छे चाहिन्छ । खराब हुन पनि मान्छेलाई मान्छे चाहिन्छ । असल हुन पनि मान्छेलाई मान्छे चाहिन्छ । एकलो मान्छे असल हुन पनि संभव छैन । खराब हुन पनि संभव छैन ।
सम्बन्धका अनेकन किस्साहरू बाँचेपछि म आफूलाई पहिलो कोटीमा राख्ने सक्दो कोशिष गर्छु । मेरो कारणले कसैलाई सुख नहुन सक्ला नसक्ला त्यो अर्कै कुरा हो, तर मेरै कारणले कसैलाई कहिल्यै दुख हुने छैन । यति प्रयत्न चाहिँ अवश्य गर्छु । कसैसँग छुट्टिनु अघि आफ्नो गल्ती भए पनि नभए पनि छुट्टिनु पर्नाको दोष आफूले लिन्छु । मैले सँधै माफि मागेर कम्तिमा यत्ति कुरा भन्छु - "म कस्तो खराब मान्छे रहेछु । आज बल्ल महशुस भयो । तिमी नभएको भए मैले आफ्नै खराबी थाह नपाउने रहेछु । तिमीलाई मैले बेक्कारमा दुख दिएँ । सक्नुहुन्छ भने मलाई माफ गरिदिनुस् । तिम्रो माफिले मेरो मन बोझमुक्त हुनेछ ।"
मैले खराब भइदिँदा संभावित ग्लानीबाट ऊ मुक्त हुनसक्छ भने छुट्टिनु अघि म त्यो अवसर किन चुकाऊँ ? कसैलाई बोझमुक्त गर्नुजस्तो आनन्द के हुन्छ ? सौभाग्य के हुन्छ ?
(तर चाहेको कुरा सधैं कहाँ पाइन्छ । जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ यस्ता मान्छे आउँछन् जसलाई दुखाउँदिन भनेर सोच्दा सोच्दै पनि उनीहरू दुखिरहेका हुन्छन् । दुख्नु यौटा कुरा दुखाउनु अर्को कुरा ।)
मैले यो कुरा आफैँ सिकेको होइन । तिमीबाट सिकेको हुँ । म तिम्रो एकलब्य हुँ । मलाई थाह छ तिमीले मसँग औँला माग्ने छैनौ । कसैलाई दुखाउनु तिम्रो चाहना कहिल्यै हुँदैन । वाध्यता त फगत बाहाना मात्रै हो । मान्छेसँग अरूलाई दुखाउन वाध्य हुने कुनै कारण हुँदैन । दुख बाहाना, हो सत्य होइन । दुखलाई सत्य भन्ने बुद्ध खासमै गलत बुद्ध हो ।
आत्माअवलोकनको यो लामो यात्रापछि मैले महशुस गरेको छु - मेरा तमाम खराबीका बावजुत पनि मलाई बोझमुक्त बनाउन तिमीले सदैव माफि गरिरह्यौ । मलाई तिमी आत्मावलोकन गर्न सिकायौ आत्मग्लानी गर्न होइन । मैले जिन्दगीमा धेरै गल्ती गरेको छु तर तिनीहरू प्रति मेरो कुनै पश्चाताप छैन । कुनै ग्लानी छैन । यो सबै कुरा मैले तिमीबाट सिकेको हुँ ।
तिम्रो जिन्दगीको यो पाठ मेरो प्रेरणापाठ हो ।
म तिम्रो यही पाठको म तिम्रो सनातन प्रेमको आदिम एकलब्य हुँ । मलाई अरू कसैको अघिल्तिर असल साबित हुनु छैन । म आफ्नै आत्मालाई निशाना साँधेर तीर चलाइहने एकलब्य हुँ ।
प्रिय मानिस, म तिम्रो सनातन प्रेमको आदिम एकलब्य हुँ । तिमीबाटै सिकेको हुँ मैले सकैलाई नि:सर्त प्रेम गर्न । तिमीबाटै सिकेको हुँ मैले सबै सिकाईको गुरू हुँदैनन् । सबै सम्बन्धहरू संस्थागत हुँदैनन् ।
आजको साइकल यात्रा सकियो । छुटेँ ।
तिम्रो अस्तित्वको वरिपरी पाइडल घुमाइबस्ने उही तिम्रो साइकले,
#CycleThoughts #Cyclay #Ekalabya
गनेस पौडेल December 5, 2021 at 6:57 AM
साइकले विचार ४ : भाग्य
'भाग्य' शब्द बनेकै 'भाजक' बाट हो । 'भाग्य'को अर्थ हो 'भाजक' ! भाग्यमा विश्वास गर्नु भनेको भाजकमा विश्वास गर्...
Blog Archive December (2) April (1) January (1) November (4) October (2) September (1) March (1) December (2) November (2) September (1) August (2) July (4) June (8) September (2) August (19) July (1) June (1) March (1) January (1) August (21) June (1) May (2) April (6) June (1) November (1) August (3) July (4) June (1) May (16) January (1) July (1) June (1) December (6) February (1) December (1)